कहाँ छ स्थानीय सरकार ? कहाँ छ प्रशासन ? काकाकुल बुर्तिवाङबासी अवैध खानेपानी समितिको मारमा ! – ebaglung.com
२०७५ असार ७, बिहीबार १६:३१	Footer Slider, Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
बुर्तिबाङ, २०७५ असार ७ । बुर्तिवाङबासी खानेपानीको समस्याले आक्रान्त बनेका छन् । घण्टौँ पालो कुरेर एक गाग्री पानीको लागी तड्पी रहेका छन् । बजारमा ढलका लागी नाली निर्माण कार्य भैरहदा खानेपानीको पाईप क्षतविक्षेत भएर पानी नियमित हुन सकेको छैन । स्थानीय केही टाँठाबाठाले ठाडा खोलाहरुमा पाईप जोडर पानी बजारमा ल्याएर गाग्री पिच्छेको मुल्य लिएर बिक्री गरिरहेका छन् । मौकामा चौका हान्नेहरु प्रशासन एवं स्थानीय सरकारबाट अभयदान पाएको अवस्था छ । काकाकुल बुर्तिवाङसीहरु ठाडाखोलाको पानी बेच्नेहरुबाट शोषित बनेको अवस्था छ । बुर्तिवाङ खानेपानी उपभोक्ता समितिको नाम सुनेका स्थानीयबासीहरुले बत्ती बालेर खोज्दा न समिति न समितिका स्वनामधन्यहरुलाई भेट्टाउन सकियो भन्दै दु:खेसो पोखिरहेका छन् । खानेपानीको यत्रो हाहाकार हुँदापनि खानेपानी उपभोक्ता समितिको अत्तोपत्तो नहुनु लाजमोर्नु भयो भन्दै चिच्च्याई रहेका छन् ।
२०६८ सालमा गठन भएको बुर्तिबाङ खानेपानी उपभोक्ता समितिले ७ वर्ष पुग्दा सम्म कुनै हिसाब किताब सार्वजनिक नगरी लाजै पचाएर बसेको छ । एक घर उपभोक्ताबाट १० हजारदेखि २५ हजार सम्म रकम असुल्दै आएको खानेपानी समितिका हर्ताकर्तहरु खानेपानी समितिलाई आफ्नै बाबुको बिर्ता झैँ ठानेर निर्धक्क काम गरिरहेका छन् । उपभोक्ताहरुलाई निचोरी रहेका छन् ।
बुर्तिवाङ खानेपानी उपभोक्ता समिति न नियमानुसार पुनर्गठन भएको छ, न यसको वार्षिक साधारण सभा हुन्छ न अधिवेशन हुन्छ, न हरहिसाब उपभोक्तावीच सार्वजनिक गरिन्छ, कानून भन्दापनि माथी रहेको यो समितिको गैह्र जिम्मेवारीलाई लिएर न कोहि बोल्न सक्ने अवस्था छ । किन कि, २०७२ सालको चैत महिनाको २२ गते स्थानीय ढोरपाटन एफएमले खानेपानी योजनाको हर हिसाबका बारेमा जानकारी लिन खोज्दा समितिका कोषाध्यक्ष ओमकुमार नेपालीले सूचना दिनेत कुरा परजावस उल्टै उक्त एफएमका स्टेशन म्यानेजर छविलाल पाण्डेलाई धम्क्याएका मात्र होईनन् आफ्नो छोरा सहित एफएममा गएर अपशव्द प्रयोग गरी दुरव्यवहार समेत गरिएको थियो ।
उक्त कार्यप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङले एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरी घटनाको छनविन गरी दोषीमाथी कार्बाहीको माग गरेको थियो । पत्रकार धम्याउने घटना इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिबाङमा पुगेपछी तत्काल हिसाव सार्वजनिक तथा नयाँ समिति गठन गर्ने भनिएको थियो । गल्ती गरेकोमा माफी मागिएपछि घटना त सेलायो तर समितिले आफ्ना भ्रष्ट गतिविधिहरु अगाडि बढाउँदै गयो । बजार क्षेत्रमा खानेपानीको धारो घर घरमा जोडिदिने भन्दै पैसा असुल्दै गयो । समितिका केही पदाधिकारीहरुले खानेपानीको मिटर समेत उपभोक्तालाई जोडिदिए । जडान चार्ज देखि विभिन्न सामानहरु उनीहरु आफैले खरिद गरेर कमाइखाने धन्दा चल्यो । समितिले गरेको गतिविधि प्रति प्रश्न उठाउनेहरुलाई समितिले विना पैसा पानी जोड्दै हिडेको पनि सुनियो । यसरी आफूखुसी गर्ने समिति प्रति वजारका उपभोक्ताहरु रुष्टछन् । ढोरपाटन नगरपालिकाको केन्द्र रहेको बुर्तिवाङ बजारमा खानेपानीको यस्तो हाहाकार हुँदा पनि नगरपालिकाले समस्या प्रति चासो नदिएकोमा बजारवासीको चित्त दु:खेको छ । उनिहरु भनिरहेका छन, बोल्न नहुने व्यथा सारो भयो ? सात वर्ष पहिले गठन भएको बुर्तिवाङ खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई कस्को संरक्षण प्राप्त छ र यस्तो महिषासुर बनेको छ ? उपभोक्ताहरु जान्न खोजी रहेका छन् ।
खानेपानीको चरम समस्या झेलिरहेका बुर्तिवाङबासीहरु सडकमा उत्रनु अगावै ढोरपाटन नगरपालिकाले यस समस्याको समाधानमा तत्काल चासो दिनु जरुरी छ र यो बिकराल समस्याको लागि बिकल्प खोज्नु अनिर्वार्य देखिन्छ । पानी जीवन हो, कसैको जीवन संग खेलबाड गर्ने हक कसैलाई छैन भन्दै बुर्तिवाङबासी भन्छन्- ‘मेयर साहेबको नाम बेचेर समितिमा हालीमुहाली गर्नेहरुलाई अबपनि छुट दिने हो भने यसले गम्भीर संकट निम्त्याउछ ।’
वडा नं. १ को भव्रेटाबाट मोटरबाटो निर्माण गर्दा बजार क्षेत्रमा आउने खानेपानी मुहान अवरुद्ध बनेको छ । समस्याका विषयमा वडा अध्यक्ष चित्रबहादुर भण्डारीलाई कुरा गर्दा समस्या बताउने होईन बरु बनाम जाम भन्ने प्रतिउत्तर दिन्छन् । सरकारमा आफू बस्ने, समस्या सिर्जना गर्ने अनी अर्कोतिर समितिलाई पैसा उठाएर रजाई गर्न दिने जनताको जिज्ञासाको हचुवा उत्तर दिने ? जनप्रतिनिधीहरुले लाज मान्नु पर्छ । यिनै काकाकुल जनताको मतले आफु यस ठाउँमा पदासीन हुन पाईयो भन्ने हेक्का रहनु पर्छ ।
वडाध्यक्षहरुमात्र नभएर नगर प्रमुखका आँखाले पनि देखेको छ, खानेपानी समस्याका कारण गृहिणीहरु गाग्रो बाकेर यत्र तत्र पानी कहाँ पाईन्छ भन्दै दौडिरहेको । यो गम्भीर समस्याका विषयमा नगरपालिकामा समेत स्थानीयले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन । आफु स्वयं उपभोक्ता भएको बुर्तिवाङबासीको यो बिकराल समस्या कसरी टुलुटुलु हेर्न बाध्य छन हाम्रा नगरप्रमुख ? किन हलचल छैन उनमा ? कतै आफ्नै दाजु खानेपानी उपभोक्ता समितिको कोषाध्यक्ष भएकाले त होईन ? भन्ने प्रश्न बुर्तिवाङबासीले दोहोराउन थालेका छन् ।
७ वर्षसम्म साधारण सभा, अधिवेशन गर्न नपर्ने, नयाँ कार्य समितिको निर्वाचनको कुरा त छोडौँ, कस्तो छ कानून ? को हो यस्को अनुगमन कर्ता ? कता छ प्रशासन ? कता गयो स्थानीय सरकार ? यो अवैधानिक खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई कसले दियो यो रजाईँ गर्ने छुट ? काकाकुल बुर्तिवाङबासी जवाफ खोजी रहेका छन् ।